၁၃.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
22 သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ချစ်သောစိတ်နှင့် လမ်းတော်သို့လိုက်၍၊ ကိုယ်တော်၌ ဆည်းကပ်မှီဝဲမည်အကြောင်း၊ ငါမှာထားသမျှသော ဤပညတ်တို့ကို ကျင့်အံ့သောငှာ သတိနှင့်စောင့်ရှောက်လျှင်၊ 23 ထာဝရဘုရားသည် ဤလူမျိုးခပ်သိမ်းတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူသဖြင့်၊ သင်တို့သည် ကိုယ်ထက်အားကြီး၍ များပြားသောလူမျိုးတို့ကို အစိုးရကြလိမ့်မည်။ 24 သင်တို့သည် ခြေနှင့်နင်းသမျှသောအရပ်ကို ပိုင်သဖြင့်၊ တောမှစ၍ လေဗနုန်တောင်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဥဖရတ်မြစ်ကြီးမှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းနားတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ မြေတစ်လျှောက်လုံးသည် သင်တို့၏နိုင်ငံအဝင် ဖြစ်လိမ့်မည်။Ref​ 25 သင်တို့ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှ မရပ်မနေနိုင်အောင်၊ သင်တို့နင်းသောမြေအရပ်၌ ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သင်တို့ကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မည်အကြောင်း၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း ပြုတော်မူမည်။
26 ယနေ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနှင့် ကျိန်ခြင်းတည်းဟူသော ဤနှစ်ပါးကို သင်တို့ရှေ့မှာငါထား၏။ 27 ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသော သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တော်တို့ကို နားထောင်လျှင်မူကား၊ ကောင်းချီးပေးခြင်း၊ 28 သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကို နားမထောင်၊ ယနေ့ ငါမှာထားသောလမ်းမှ လွှဲရှောင်၍၊ မသိဖူးသော အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကို မှီဝဲဆည်းကပ်လျှင်မူကား ကျိန်ခြင်းကိုငါထား၏။
22 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်အံၤခဲလၢာ်သ ပှၢ်တၢၢ်လၢသုဘၣ်မၤအီၤ, လၢသုကအဲၣ်ယွၤသုကစၢ်, လၢသုကပိာ်အကျဲခဲလၢာ်, ဒီးစဲဘူးဒီးအီၤဒီး, 23 ယွၤ ကဟီထီၣ်ကွံာ်ပှၤအကလုာ်ခဲလၢာ်န့ၣ် လၢသုမဲာ်ညါ, ဒီးသုကမၤန့ၢ်ပှၤကလုာ်တဖၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ဆူၣ်န့ၢ်သုကစၢ် ဒၣ်သုဝဲလီၤ.
24 ကယဲၢ်တၢ်အလီၢ်လၢ သုခီၣ်ညါသးယီၢ်လီၤန့ၣ်က ကဲထီၣ်သုတၢ်လီၤ. လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဒီးလဘၤနိၣ်, လၢထံမိၢ်ပှၢ်, ထံပရၤသး, ဒီးပၢၢ်လၢပီၣ်လဲၣ်လၢခံက တၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်သုကီၢ်အဃၢၤတဖၣ်ကအိၣ်လီၤ.
25 ပှၤတဆၢထၢၣ်ဘၣ်လၢသုမဲာ်ညါဘၣ်, ယွၤသုကစၢ် ကပာ်တၢ်ပျံၤသု, ဒီးကပာ်သုလၢတၢ်ပျံၤအလီၢ်လၢက ယဲၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢ သုကယီၢ်အီၤတပူၤလၢ်လၢ်, ဒ်အစံး ဘၣ်သုအသိးန့ၣ်လီၤ.
26 ကွၢ်ကွၢ်, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ယပာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ဒီးတၢ်ဆိၣ်အၢလၢသုမဲာ်ညါလီၤ.
27 သုမ့ၢ်ဒိကနၣ် ယွၤသုကစၢ်အတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လၢ ယမၤလိာ်သုလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒီး,တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ.
28 ဒီးသုမ့ၢ်တဒိကနၣ်ဘၣ် ယွၤသုကစၢ်အတၢ်မၤလိာ် တဖၣ်, ဒီးဃၣ်ကပၤလၢကျဲလၢယမၤလိာ်သုလၢမုၢ်မ ဆါတနံၤအံၤ, ဒ်သိးသုကလဲၤပိာ်ကစၢ်အဂၤတဖၣ်လၢ သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤအခံဒီး, တၢ်ဆိၣ်အၢလီၤ.